လှရာရာရွေး ပန်မပေးရ ဆံမြညှာကေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » လှရာရာရွေး ပန်မပေးရ ဆံမြညှာကေ	14
လှရာရာရွေး ပန်မပေးရ ဆံမြညှာကေ
ကျောင်းသားဘဝတုန်းက သင်ခဲ့ ဖူးတဲ့နတ်ရှင်နောင်ရတုပါ။ အကုန်အားလုံး မမှတ်မိတော့ ပေမယ့်နတ်သွင်ပျံကြွ မတတ်သော် ဆိုတဲ့ နောက်ဆုံးအချပိုဒ်လေးကတော့ဒီအချိန်ထိတိုင်အောင် အင်အားပြင်းပြင်းနဲ့စွဲငြိနေဆဲ။ ကိုယ့် မြေ ကိုယ့် ရေရဲ့ အဝေးမှာ အနေကြာလာတော့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့အမှတ်တရလေးတွေများပေါ်လာခဲ့ကိုယ်လည်း ငှက်ကလေးတစ်ကောင်လိုသာ တောင်ပံဖြန့် ဝဲ
အိမ်အပြန်လမ်းကို အပြေးလေး ပြန်လိုက်မိချင်ရဲ့ ။
စစ်မြေပြင်က စစ်ဘုရင်မင်းသား နတ်ရှင်နောင်မင်းသား ရှေ့ တန်းစစ်မြေ စခန်းတစ်နေရာမှာ ရာသီပန်းကလေးတွေမြင်တွေ့ လေတော့နောက်တန်းကကျန်ရစ်ခဲ့ သူ ပန်းကြိုက်မလေး ချစ်တဲ့ ဓာတုကလျာလေးအတွက် လှနိုးလှရာ ပန်းကလေးတွေ ခူးဆွတ်လို့စိတ်ကူးနဲ့ဆံဦးထက်မှာ ပန်ပေး ကြေနပ်ရှာရတယ်။
တောတွင်းပျော်တို့ လို ရေခြားမြေခြား ရပ်တစ်ပါးမှာ ဝမ်းစာရေးအတွက် ဘဝတိုက်ပွဲ တိုက်နေရသူတွေမှာလည်း ဒေသက ကျန်ရစ်ခဲ့ သူတွေကို လွမ်းဆွတ်သတိရမိတဲ့အခါ ကိုယ့် လက်လှမ်းမှီရာ အရာလေးတွေနဲ့ တိုင်တည် လွမ်းဆွတ်မိတတ်ကြပါတယ်။
တောတွင်းပျော်တို့ကျက်စားနေထိုင်ရတဲ့တောတောင်ကြီးထဲ ရာသီအလိုက် ပန်းကလေးတွေ ပွင့် တတ်ပါတယ်။ သူတို့ လေးတွေဟာ တော်ဝင် နန်းထိုက် ထီးကြိုက်တဲ့ ပန်းကလေးတွေ မဟုတ်ကြပေမယ့်တောတောင်တစ်ခွင်ကို သူတို့ နိုင်အား တတ်စွမ်းသမျှနဲ့ဆင်ယဉ် အလှတင်ပေးနေကြတာ ရိုးသားပကတိ ချစ်စရာကောင်းလှပါတယ်ဗျာ။
သူတို့ လေးတွေရဲ့သဘာဝအတိုင်း ခပ်ရိုင်းရိုင်း အားမာန်အပြည့် နဲ့အလှတွေကို မြင်တွေ့ မိခဲ့ လေတော့လူ့ လောကမှာမရှိတော့ ပြီဖြစ်တဲ့ပန်းချစ်သူမလေးတစ်ယောက်အတွက် ရည်စူးပြီးပုံလေးတွေ ရိုက်ခဲ့ မိပါတယ်။
သူ့အပင်မှာ
သူ့အဆင်နဲ့သူယဉ်
ဂုဏ်တင့် တာမို့ 
Ma Ma says: အဲသဟာတွေကြောင့် တောတွင်းပျော်နေတာ ထင်တယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 390
တောတွင်းပျော် says: ပျော်လည်းပျော် မပျော်လည်းပျော်
ပျော်ပျော်သာနေရတာပါပဲ မမ မမ။
Mike says: .သဘာဝအတိုင်းလှနေတဲ့ပန်းတွေပေါ့..
.၈ပုံမြောက်က ပိုးမွှားလေးတွေဖမ်းစားတဲ့ ထောင်ချောက်နဲ့တူတယ်
တောတွင်းပျော် says: ဟုတ်တယ်။ သူက အဖုံးလေးနဲ့ ။
အကောင်တွေ ခွက်ထဲက အရည်သောက်ဆင်းရင် ပိတ်သွားတတ်တယ်။
အောင် မိုးသူ says: တောပန်းလေးတွေ လှပါ တောတွင်းပျော်က DSLR ကြီးနဲ့ မရိုက်ဘူးလား။
တောတွင်းပျော် says: ပုံ ၄၊ ၉ ၊ ၁၀ ၊ ၁၁ က ကင်နွန်နဲ့ 
ဇီဇီခင်ဇော် says: နာ့ ကို အဲဒီ တော အလည်ခေါ်ပါလား အေ။
တောတွင်းပျော် says: တကယ်ရိုက်ချင်ရင် ရိုက်ချင်စရာတွေက အများသား။
ရိုက်ချိန်မရှိ လို့ သာ။
Ma Ei says: လှလှပပ ပွင့်နေတဲ့ ပန်းကလေးတွေကြောင့်
တောတွင်းပျော် တစ်ယောက် တောတွင်းပျော်နေတာကိုး….
လိမော်္မရောင် အဆုပ်လိုက်ပန်းကလေးတွေ တော်တော်လှတယ်နော်
တောတွင်းပျော် says: အင်း!
တောတွင်းပျော်ရဲ့ပန်းနာမည်ပေးနည်းက
တောထဲမှာတွေ့ တဲ့ ပန်းမို့တောပန်း
( ဗဟုသုတကြီးပုံများ )
အဓိက တောဆင်တွေ။ သူရှောင် ကိုယ်ရှောင်ပေါ့ ။
ကျားနက်( တစ်ကိုယ်လုံးအနက်ရောင်) မကြာမကြာတွေ့ ဖူးတယ်။
ဝက်ဝံ။ သူက ညမှာ စခန်းကမိုးဖိုချောင်က ဆီ သကြား ဆန် လာလာမသွားတတ်တယ်။ ဆီကတော့သူတို့ အကြိုက်ဆုံး။
hydruli engine oilဆီကအစဖေါက်သောက်တတ်တယ်။
Ma Ma says: ကျားနက်၊ ၀က်ဝံ :O
တောတွင်းပျော် says: ဝက်ဝံပုံ ညမှာ hilux ကားထဲက စောင့် ရိုက်ထားတာတော့ ရှိတယ်။ ကင်မရာ အသေးနဲ့ISO မမြင့် တော့မှုန်တယ်။ မသဲကွဲဘူး။
Was this answer helpful?LikeDislike 84
အတွေးလေး says: အရိုင်းပန်းတွေပေမယ့်လှတာတော့အတော်လှ တာဗျ
တောတွင်းပျော် says: အတွေးလေး
နာမည်ကို အတွေးကောင်းကောင်းပေးထားတာ ကဗျာဆန်တယ်နော်။
ရွာထဲကိုလည်း အတွေးလေးရဲ့အတွေးကောင်းကောင်းလေတွေကိုလဲ